Insomnia, nguDaniel Martín Serrano. Buyekeza | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 07/10/2021 12:00 | Abalobi, Amabhuku, Inoveli emnyama, eziningana
Insomnio iyona noveli yokuqala eyedwa ngu UDaniel Martin Serrano, kodwa le Madrilenian inezinganekwane eziningi ezingemuva ezinomsebenzi weminyaka engamashumi amabili uchungechunge lombhali njengoba Isibhedlela Esiphakathi, velveteen, Isikhulu o Izilwandle eziphakeme. Unguprofesa weTelevishini script eMadrid Film School futhi manje usezethule ngalesi sihloko sohlobo olumnyama esithola impumelelo ejwayelekile phakathi kwabafundi nabagxeki. FUTHI kwami bekulokhu enye yezincwadi zalo nyaka. Lokhu okwami ukubuyekezwa okwathi, ngenhlanhla, ngakwazi ukuhlanganyela nombhali eMcimbini Wokugcina Wezincwadi waseMadrid.
1 Ukuqwasha - Ukubuka konke
1.2 Izikhathi ezimbili
Insomnio - Buyekeza
Lowo owayenguMhloli uTomás Abad uphethwe yilesi sifo ukulala okungamahlalakhona futhi, ngaphezu kwalokho, okweqile. Futhi uma ufika ekhasini lokugcina lale noveli, nawe ucabanga ukuthi ukubambe ukukhathala nosizi. Ngaphezu kwalokho, ukulandiswa komlando wayo akukunikanga ukuphumula, futhi lelo yizinga le- ukucindezeleka nobumnyama ohlupheka ngenxa yesikhathi sakhe nesikhathi sakhe esedlule lokho ubonga ngokukhululeka ukuphumula kwabo, Noma kunjalo.
Iqiniso ukuthi uTomás bekuhamba kahle emaphoyiseni, wayeyi- uchwepheshe omuhle kakhulu neqembu elisebenza kahle elizungezile ne- impilo yomuntu siqu Kwakusebenza futhi, ngomshado othule kepha nendodana ayibonayo ngokulambisa ngenxa yalowo msebenzi odonsayo. Kepha lokho umsebenzi iba ngokweqile lapho ziqala ukuvela izidumbu zezinsizwa ezinqunywe amakhanda lokho kuzonqwabelana nge-macabre puzzle.
Bese uthola ukuthi kukhona umuntu osondelene kakhulu kuye ngubani abathintekayo futhi kubonakala kungaphezu kwecala. Lokho kuzoba yiphutha lakho, ngoba isinqumo esibi okudingekayo ukumvikela kuzoba imbangela yakhe ukuxoshwa, ukukhishwa inyumbazane nokwaliwa yingxenye enhle yomphakathi. Ukusuka lapho kuya phansi esihogweni kukhiqizwa ukuqwasha, i-culpa nokukhuluphala okuningi lapho, okwamanje, ngenkathi uzama ukuphila nakho umantshingelane ubusuku ku ukupaka bese kuba kukhulu kakhulu amathuna de la Almudena, umuntu othile ukukwazisa lokho iphupho elibi alikapheli.
Enye ye ukushaya yenoveli ukusenza sidlule kuyo izikhathi ezimbili ezilandisayo okukhonjisiwe kufayela le- ukusetshenziswa kolimi esikhathini samanje Okwamanje— nasesikhathini esedlule -Ukusitshela ukuthi kwenzekeni nokuthi sifike kanjani kulesi sipho. Iphuzu ukuthi indaba efanayo, noma zombili, zigijima ngokufana ne- isikhathi kulinganiswe ngokuphelele ukuthi ikhombisa ifayili le- ukuhweba okungangabazeki yombhali njengomlobi wesikrini. Futhi ikwenza kahle kangangoba ngisho nakubafundi abangawuthandi kakhulu umlando wamanje, njengoba kunjalo kimi, awumemezi nakancane.
Bayasiza futhi izingxoxo ezinhle nerosari labalingiswa kwesibili tan yakhiwe kahle njengo-protagonist. UTomás uzolulama abanye babo, abazozama ukumsiza, njengomlingani wakhe wakudala, futhi athole nabalingani abasha. Kepha akekho noyedwa ozokwazi ukuvimbela impilo yakhe ukuthi ingashoni kakhulu, alahlekelwe ngumndeni wakhe futhi acishe alahlekelwe yingqondo.
Elinye iphuzu elinamandla yi ukubeka ngakho-ke ngokuhambisana nobumnyama, ithoni yesipoki futhi cishe engapheli yasebusuku ku-a Madrid kuyaqabukela kuchazwe ngabaningi kangaka ubumnyama. Ngaphezu kwalokho, izindawo zokupaka nezindawo zamathuna zikukhuthaza ngokwengeziwe lokhu umuzwa wokungekho ngokoqobo u-Abad anakho. Ufuna nje ukuxazulula icala nokulala, ngoba unokwanele ukuhlawulela icala elikhulu elimhlupha ehlushwa ukuqwasha okulimazayo.
Yize ngokukubeka futhi okuhlobene kakhulu noma, okungenani, okwami ​​kakhulu, ake sithi ngokuzenzakalela njengobungcweti ekufundeni kuqala bese njengomfundi: izigaba zinde kakhulu, abaningi ekhasini elilodwa. Kepha lokho okushiwoyo, isikhathi sokulandisa siphumelele kangangokuba bayathethelelana.
Ukuthi uDaniel Martín Serrano akakwazanga ukwenza i-debut yakhe ibe ngcono ekulandiseni, evela kohlobo olwehlukile, olushintshayo nolusheshayo njengombhalo. Indaba enhle, ukwakheka okuhle kanye nesiphetho njengokusho kwemithetho futhi lokho kukushiya unaleyo flavour ezwakala kaningi kulolu hlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Insomnia, nguDaniel Martín Serrano. Buyekeza